Rohingya Students Forum: Nizor Fosón Saái-saái Gorón
🔋Nizor Fosón Saái-saái Gorón🔋
Ek motto, Dóni tará bera beri duzon accíl. Dónittu cíyari gorá bicí couk accíl. Foittó din cíyar goittó zaito. Zanuwar ókkol mari aintó. Beri ye cíyari hamgorá diyái nofaré.
Enné, ek dinná íbayé beçaré hoordé, “Allah ré razi gorí bár thaim zargói. Allahr ham goró ná. Ruza rakí ebadot gorá fori bo. Noilé Allah ré ki juwab diba. Uu Fir saab or háñsé zai kessú zikír askár lou goi” hoi beraré diferái yé. Bera yó dilmon fatol gorí giyé.
Fir sabór górot fooñsi oré Fir sab or lói muulot óilo. Fir sáb oré ugguá baçí mikká zikír dibollá aros goijjé. Fir saabeyó báfi sinti óre zikír dilodé ki boli hoilé, “NIZOR FOSÓN SAÁI SAÁI GORÓN”. Ibá fúni Dóni ammúk míkka óiye. Fir saab zé, ibá ki dilá. Mui nizor fosón mozin cíyari ham goriddé ajja 50 bosór ór gái. Mogor ajfojjonto berír mon loi noófarí. Ya sairdé Fir saabeyó nizor fosón óre abbár goittó hoor. Keen gorá fori bóde ekká hooná zé.
É tuunót fir sabetaré “Ikká ai saái” hoi hañsé daki fúñc ugguá loi gutá maijjé. Dóni yé “úff” gorí sikkrai uiththé. Toi, “Toré fúñc loi gutá maijjí dé fosón laiggé né?” hoi fusar loiyé. Dóni ye “keen gorí gom laibó zé?” . Fúñc or hotá félo, sugé kundi sailé oddó mortú gom noláge zé” hoi juwab diyé. “Enn óile” Fir sábehoordé, “toré fúñc loi gutá mararé óddo gom nolágilé, tui sél loi mari, tir loi mari eduun foran mari féloddé yían nizor tú fosón nolagé dé ham, fororé goroddé noóné.” “nizoré mara óilé fosón nolá mogor fororé óilé honó nobáfi maros”. Nizoré misá hoilé fosón nolá, fororé óilé tui misá hoos. Tor gom noláge dé ham forór ré gorós. ” hoi sáf saf góri fir sabebuzái diyé. Dóni ye busfai yé. O noóki, aññrlá ziyián fosón gorí, fororlá yó yían gorón saa. Fir sáb ottú maf saái óre ar nogoríbo bulí Toubá goijjé. Édin lotí Dóni yé cíyari adod félái diyé.
Húlasá: Nizor tú fosón nolágedé ham fororé yó no gorón.
📒 ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုလုပ်ပါ 📒
တစ်ခါက သူဌေးလင်မယား နှစ်ယောက်ရှိတယ်။ သူဌေးက တောလိုက်တာ အမဲလိုက်တာ ဝါသနာရင့်တယ်။ နေ့တိုင်း အမဲလိုက် ထွက်ပြီး သားကောင်တွေကို သတ်ကြတယ်။ အဲ့ဒါကို မိန်းမ ဖြစ်သူက မုဆိုး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူကို ဒီအလုပ်လုပ်တာ မကြိုက်ရှာဘူး။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့ တော့ သူ့ ယောကျာ်းကို ရှင် ဘုရားသခင် လက်ခံတော်မူတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ချိန်လွန်နေပြီ။ ဥပုသ်လေး ဘာလေး စောင့်ပြီး တရားလေး ဘာလေးလုပ်ပါဦးလား။ ဒီတိုင်းနေရင် အလ္လာဟ်သခင်ကို ဘာသွားဖြေမလဲ။ ရွာထိပ်က ဆရာရသေ့ ထံ သွားပေါ့ ဆိုပြီးလွတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ သူဌေးကြီးကလည်း စိတ်လိုလက်ရ သွားရှာတယ်။
ဆရာရသေ့ကျောင်းသင်္ခမ်းသို့ ရောက်လို့ ဆရာရသေ့ကို ဆလာမ်နှုတ်ဆက်ပြီး တပည့်တော်ကို ဇီကီးရ် တစ်ပုဒ် လောက် တိုတိုတုပ်တုပ်လေး ဟောပေးပါလို့ တရားတောင်းတယ်လေ။ ဒီတော့ ဆရာရသေ့ ပေးလိုက်တဲ့ တရားလေး က “ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ " တဲ့ ။ ဒါအတိုဆုံး တရားပဲတဲ့။
ဒီတော့ သူဌေးကြီးက အံ့သြသွားတယ်။ ဆရာသခင် တပည့်တော်ဟာ ဒီအမဲလိုက်တဲ့ အလုပ် ကို ကြိုက်နှစ်သက်လို့ ပဲ တောလိုက်မုဆိုးဘ၀နဲ့ရပ်တည်လာတာ နှစ်(၅၀)တောင် ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်ထိ ကျွန်ုပ်မယားရဲ့ ဘာတိုးတက်မှုမှ မရပါလားဘုရား။ ခုလည်း ဆရာသခင်က ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ် ဆိုတော့ ဘယ်နှယ့်များ လုပ်ရပါ့လို့လျှောက်တော့။
ဆရာတော်က ဒီနားလာခဲ့လို့ခေါ်ပြီး သူ့ ကို အပ်နဲ့ ထိုးလိုက်တယ်။ ဒီတော့ သူဌေးကြီး က “ အား " လို့ ထအော်တာပေ့ါ။ အဲဒီမှာ ဆရာတော်ကမေးတယ်။ မင်းကို အပ်နဲ့ ထိုးတာကြိုက်လား? တဲ့။ ဒီတော့ သူဌေးကြီးက ပြန်ဖြေတယ်။ ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ ဘုရား။ တပည့်တော်က အပ်နဲ့ မပြောပါနဲ့ ၊ မျက်စောင်းထိုးရင်တောင် ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောသတဲ့။ ဒီမှာပဲ ဆရာတော်က ဒါဆို မင်းကိုအပ်နဲ့ ထိုးတာတောင် မကြိုက်ဘူးဆိုရင် လေးနဲ့ ပစ်၊ မြှားနဲ့ ပစ်ပြီး အသက်ကို သတ်ဖြတ်နေတာဟာ ကိုယ် မကြိုက်တဲ့ အလုပ်ကို သူများကို သွားလုပ်နေတာပဲပေ့ါ။ သူလဲ ဇီကီးရ် ရဲ့ အနက်ကို ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ပြီးတော့ နောက်နောင် ပြစ်မှားမယ် မဟုတ်ကြောင်း ကတိကဝတ်ပြုခဲ့တယ်။ ထိုနေ့မှ စ၍ အမဲလိုက် ဝါသနာအိုကို အပြီးအပြတ် စွန့်လွှတ်ခဲ့လေတယ်။
လူတော်တော် များများဟာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ့်ကို သတ်မှာကျ မကြိုက်ဘူး။ သူများ အသက်ကျသတ်တယ်။ ကိုယ့်ကို ညာပြောတာကျ မကြိုက်ဘူး။ သူများကျတော့ ညာပြောပြန်တယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အလုပ်တွေတိုင်းကို သူများအပေါ်မှာလုပ်နေတတ်တယ်လေ။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်ဟောတဲ့ “ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ပါ။”ဆိုတဲ့တရားလေးဟာ ပညာပါပြီး ထိရောက်လှပါတယ်။
ဒီတရားလေးကို သိခွင့်ရသွားကြကုန်သော စာဖတ်သူအပေါင်းတို့လည်း နေ့စဉ် ကိုယ်ကြိုက် သော အရာများကိုသာ သူတစ်ပါးအား ပြုမူပြောဆို ဆက်ဆံ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြလို့ အကောင်းကံများကို သာ ဖန်တီးနိုင်ကြပြီး ကောင်းကျိုးတွေရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေသော်။
Labels: Aesop's Fable, Rohingyalish, Story